Blog - Uxolo lwe-CBD
Indlela onokuPhakama ngayo ngokusemthethweni kwi-THC phantse naphina eMelika
Shiya Comment	/ Akohlulwanga / Nge James
Iposwe ngokusemthethweni nguLifehacker ukuyenza imeko ye-1846592514th ukwenza njalo, kwaye eyesibini ngobukhulu ngabemi emva kweCalifornia. Ukuthatha ngokusemthethweni ukuzonwabisa ngoku kukhetho kubantu abamalunga nezigidi ezingama-16 baseMelika ngaphezulu kweminyaka engama-91- kodwa nokuba awunguye,…
Indlela onokuPhakama ngayo ngokusemthethweni kwi-THC phantse naphina eMelika Funda ngokugqithisileyo "
I-CBD yokuSebenza kweMidlalo
3 Comments	/ I-CBD yeembaleki / Nge James
Ekuqaleni, i-CBD (i-Cannabidiol) yeza nengqwalaselo yabaphandi ngeempawu zayo ze-anticonvulsant, kodwa njengoko uphando oluqhubekekayo luqhubeka, iziphumo ezongezelelweyo zonyango ziye zathathelwa ingqalelo kwiklinikhi nakwizinto ezingezizo ezekliniki kubandakanya nezo zembaleki. I-CBD yinxalenye enganxilisiyo kwisityalo se-cannabis kwaye ayisathintelwanga yi-Arhente ye-Anti-Doping Agency kunye…
I-CBD yokuSebenza kweMidlalo Funda ngokugqithisileyo "
Ngaba i-CBD iyazinceda njani iimbethi manqindi?
Shiya Comment	/ iindaba / Nge James
Ipapashwe ngoMgqibelo, nge-13 kaJuni ngo-2020 ngeeNdaba zoMlo wamanqindi zaseBritane Kutheni le nto iimbethi manqindi zisebenzisa ioyile ye-CBD ngakumbi? Zombini iimbethi manqindi ezingahlawulwayo kunye neengcali ziya zisebenzisa ioyile ye-CBD ukubanceda kuqeqesho lwabo, ekulweni nasekulawuleni. Intshatsheli yeWBA International super-welterweight uAnthony Fowler yimbaleki yokuqala eza kuthi ithi qatha engqondweni xa icinga ngabasebenzisi beoyile ye-CBD,…
Ngaba i-CBD iyazinceda njani iimbethi manqindi? Funda ngokugqithisileyo "